Russia dia ilay mpiara-miombon'antoka amin'ny Convention & Culture an'ny ITB Berlin 2020
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Russia dia ilay mpiara-miombon'antoka amin'ny Convention & Culture an'ny ITB Berlin 2020
Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Alemana • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny firenena lehibe indrindra eran'izao tontolo izao dia ny Convention & Culture Partner an'ny World Trade Largest Travel Show. ”Faly izahay fa nahazo antoka an'i Russia ho mpiara-miombon'antoka amin'ny Convention & Culture an'ny ITB. Rosia manana toerana ambony eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany iraisam-pirenena. Ho an'ireo mpitsidika liana amin'ny kanto sy ny kolontsaina, ny lova ara-kolontsaina manankarena indrindra dia misongadina manokana ", hoy i David Ruetz, lehiben'ny ITB Berlin, tamin'ny sonia fifanarahana fiaraha-miasa tamin'ny 5 Novambra 2019 tany London, ary nanampy hoe:" Russia dia nampiranty matetika tao ITB Berlin nanomboka tamin'ny 1994 ary hisolo tena azy indray amin'ity taona ity ao amin'ny Hall 3.1. Ny Fifanarahana ITB Berlin dia hanasongadina lohahevitra mahaliana ihany koa amin'ny fironana amin'ny fizahan-tany any Russia. "
”Ny fiaraha-miasa miaraka amin'i ITB Berlin 2020 manome antsika sehatra iray lehibe hampiroboroboana an'i Russia sy ny fahasamihafana ara-kolontsaina goavambe ho toerana fizahan-tany ho an'ny mpihaino iraisam-pirenena ”, hoy i Zarina Doguzova, Lehiben'ny maso ivoho Federaly Rosiana misahana ny fizahan-tany.
Russia tamin'ny Fifanarahana ITB Berlin
Amin'ny maha mpiara-miasa amin'ny Fifanarahana sy kolontsaina azy dia hisolo tena an'i Russia amin'ny fotoam-pivoriana marobe ao amin'ny ITB Berlin Convention. Zarina Doguzova, dia hanao kabary fandraisana amin'ny fanokafana ny kaongresy fizahan-tany lehibe indrindra manerantany amin'ny Alarobia 4 martsa ao amin'ny CityCube Berlin (Room A4 / A5) (10.45-10.50 maraina). Ao amin'ny CityCube ihany koa, ny fotoam-pianarana tranga momba ny "Fanovana ny indostrian'ny fizahantany manerantany amin'ny alàlan'ny Breakthrough Travel Startups" dia hatao miaraka amin'i Russia amin'ny Alakamisy 5 martsa amin'ny 3 ka hatramin'ny 3.45 hariva. Ny vahinin'ny tontonana dia Ilya Gusakov, Lehiben'ny fampandrosoana ny asa aman-draharaha, MAPS.ME, Nalatia Pukhova, Mpitantana ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa, Travelpayouts avy amin'i Aviasales, Eugenia Strizhkina, Lehiben'ny biraon'ny Tetikasa momba ny fotodrafitrasa, RussPass ary koa Egor Yakovlev, talen'ny fampandrosoana ny orinasa, izi.TRAVEL .
Amin'ny Andro Destination, Zoma 6 Martsa, 14.00-14.45 hariva, ny tontonana "Stereotypes Destination: Marketing amin'ny Video ho fitaovana mahomby amin'ny famoronana sary" dia ao anaty fandaharam-potoana. Ny fahatsapana ny Stereotypical ny mpizahatany no ivon'ny dinika. Mila Ilushina, Lehiben'ny Sampan-draharaha misahana ny tetikady stratejika, Biraon'ny tetik'asa momba ny fizahan-tany sy ny fandraisana vahiny, Elena Lysenkova, mpanolotsaina ny lohany, masoivoho federaly ho an'ny fizahan-tany Russia, Irina Sergeeva, Lehiben'ny sampan-draharahan'ny fizahan-tany iraisam-pirenena, maso ivoho federaly ho an'ny fizahantany Russia ihany koa satria Vladimir Varnavskii, CEO & mpanorina, VResorts, dia miresaka momba ny maha-zava-dehibe ny atiny video ho singa iray mahomby amin'ny fananganana fampielezan-kevitra mahomby.
Firenena manana adidy ambony
Russia, miaraka amin'ny tantarany lava sy manan-karena amin'ny lova ara-kolotsaina, dia firenena manana superlatives. Ao anatin'ny Eoropa sy Azia dia mitambatra fitaomana maro samihafa izy io. Ny kolontsaina avy any Eoropa Andrefana, Sina ary ny Atsinanana dia namokatra fangaro zavakanto, maritrano, mozika ary fitaomana ara-panahy tsy manam-paharoa.
I Mosko no ivon'ny politika sy ny asa ary koa ny ivon-toeran'i Rosia. Ny tilikambon'i Kremlin miaraka amin'ireo kintana mena sy ny firafitra miendrika block amin'ny vanim-potoanan'ny Stalin, Red Square, ny fo mitempo an'i Moskoa ary ny fisehoan-javatra ara-tantara, ny Theatre Bolshoi, tranon'ny iray amin'ireo orinasan-ballety malaza eran-tany, dia ohatra maneho ny kolontsaina rosiana. Ny tranom-bakoka Hermitage ao St. Petersburg dia misy ny fampirantiana zavakanto lehibe indrindra sy malaza eran-tany. Ny tranombokim-panjakana ao amin'ny Winter Palace, natsangan'ny fianakavian'i Tsar 250 taona lasa izay, izay misy fampirantiana telo tapitrisa naseho tao amin'ny efitrano 300, dia iray amin'ireo fanangonana zavakanto lehibe indrindra eto an-tany.
Ny Trans-Siberian Railway dia manolotra traikefa akaiky momba ny tantaran'i Rosia amin'ny lafiny maro, ny fomban-drazana ary ny angano. Ny lalan'ny lalamby lava indrindra eto an-tany dia maherin'ny 9,000 kilometatra ny halavany, miainga avy any Moskoa ka hatrany Vladivostok amin'ny dia iray izay mamakivaky an'i Eropa sy Azia. Toeram-tongolo sy monasiteran'ny bodista, tany efitra ary Taiga - ny lisitry ny fisarihana dia raha mbola ny Làlan'ny Trans-Siberian Railway ihany.